Ahoana ny fomba hampiasana ny Pluto TV (2020) - Pluto.tv/activate - Fialam-Boly
Ny fanitarana ny tontolon'ny nomerika marani-tsaina dia tsy isalasalana fa nahatonga fiakarana tsy ilaina amin'ny vidin'ny fialamboly. Eritrereto izany. Ny vidin'ny tariby DTH dia mora azo kokoa noho ny vidin'ny apps izay misy ankehitriny. Tsy isika rehetra no afaka mandoa ireo saram-pisoratana anarana lafo vidy ireo. Ny sasany amintsika dia te hanana fialamboly maimaim-poana. Na dia misy mpanome tolotra toa an'i YouTube aza dia mitady zavatra azo itokisana kokoa, toa ny tariby amin'ny fahitalavitra.
Raha izany no izy, angamba angamba ny Pluto TV dia hifanaraka tanteraka amin'ny fitakianao. A serivisy mivantana maimaim-poana izay mitondra anao amin'ny fahana mivantana an'ny sasany amin'ireo fantsona malaza indrindra, Movies & fanatanjahan-tena maneran-tany. Na dia voafaritra manokana aza ny faritra dia afaka miditra amin'ny atiny manerana an'izao tontolo izao ianao miaraka amin'ny fiarovana fanampiny raha mampiasa VPN ianao.
Andao hojerentsika ny fomba hampiasana ny Pluto TV!
Fifanarahana Pluto TV:
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny PlutoTV dia ny mifanentana amin'ny rehetra. Azonao atao ny miditra amin'ny toerana rehetra. Manitatra any amin'ny faritra sy firenena maro koa izy io mba hametrahana ny serivisiny maimaimpoana. Na dia tsy dia be loatra aza ny fantsom-pifamoivoizanao dia manandrana mitondra fialamboly tsara indrindra ho anao ny PlutoTV.
Na izany na tsy izany, Pluto dia misy amin'ny Smartphones, Android, iOS, Mac, Windows, Amazon, ary Roku. Maro ny fahitalavitra Smart manohana ny Pluto TV, ary azonao atao ny misintona azy handefasana atiny maimaimpoana. Ity dia iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny Pluto TV. Izy io dia misy mifanentana amin'ny zavatra maro. Azonao atao ihany koa ny misintona azy ao amin'ny console anao amin'ny lalao mba hidirana amin'ny fialamboly tsy tapaka.
Ity misy torolàlana momba ny fametrahana ny Pluto TV amin'ny sehatra samihafa.
Mametraka ny Pluto TV:
Pluto TV dia sehatra misokatra ary azo apetraka amin'ny tranokala ofisialy na fivarotana app. Ara-dalàna tanteraka izany, ary tsy misy fomba maloka ahafahanao manaraka ny fametrahana azy. Ny sisa hataonao dia ny manaraka ireto dingana ireto:
Ho an'ny fitaovana marani-tsaina -
Tsidiho ny fivarotana ofisialy (Amazon, Playstore, iTunes, sns.)
Mitadiava Pluto TV
Araho ny fizotran'ny fametrahana
Ho an'ny Firestick sy SmartTV -
Ny ankamaroan'ny Amazon Firesticks miaraka amin'ny Pluto TV mialoha. Raha tsy izany dia azonao atao ny misintona azy avy amin'ny fivarotana ofisialin'i Amazon na fivarotana fampiharana hafa. Raha tsy miaraka amin'ny rindrambaiko napetraka ny fahitalavitra manan-tsaina dia mety mila mampiasa ny kinova fitetezana tranonkala ianao.
Ho an'ny solosaina manokana -
Ho an'ny solosaina manokana, azonao atao ny mandeha any amin'ny ofisialy Tranonkala PlutoTV ary mandehana misintona. Any ianao dia afaka misintona ny fampiharana PlutoTV. Raha tsy izany, afaka mandeha mankany amin'ny fivarotana windows ianao ary misintona azy avy any. Ho an'ny Xbox, azonao atao ny mitsidika ny fivarotana Microsoft hisintona azy avy any, koa.
Ho an'ny lalao gaming -
Ankoatra ny Xbox, azonao atao ny mitsidika ny ofisialy Fivarotana Sony misintona Pluto TV avy any ho an'ny PS3 na PS4
Ho an'ny mpizaha tranonkala -
Tsy misy rindranasa na fanitarana azonao ampiasaina hidirana amin'ny Pluto TV ireo mpizaha tranonkala. Na izany aza, azonao atao ny mitsidika ny PlutoTV.com ofisialy handefasana ny fampiharana mivantana eo amin'ny tranokalanao ary handefasa ireo fantsona maimaim-poana tsy misy fetra.
Tsy misy drafitra famandrihana ho an'ny PlutoTV, satria maimaim-poana tanteraka izany. Midika izany fa tsy misy ny drafitra marketing karazana atody ambony naoty ambony ahazoana misoratra anarana sy misoratra anarana amin'ny atiny. Na izany aza, raha te hanana traikefa manokana ianao hanamboarana ny fampiharana sy ny interface, dia mety te hisoratra anarana ianao.
Dingana hisoratra anarana amin'ny Pluto TV:
Mora ny misoratra anarana.
Tsidiho ny tranokala ofisialy na sokafy ny fampiharana ary kitiho ny Signup.
Azonao atao ny misafidy ny hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny Gmail na safidy hafa hahazoana fidirana haingana
Fenoy ny mombamomba anao dia afaka mandeha ianao
Ny fidirana an-tserasera dia ahafahanao mifehy ny atiny misy amin'ny mombamomba anao. Izy io dia afaka manampy anao mametra ny fantsona sasany, indrindra raha manan-janaka ianao. Toy izany koa, azonao atao ny manampy fantsona na programa amin'ireo tianao mba hahazoana ilay fampandrenesana farany sns.
Misy fampahavitrihana TV Pluto hafa ve?
Eny. Azonao atao ny mampihetsika ny Pluto TV amin'ny fitaovana maro hampiasana ny smartphone anao ho lavitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mampandeha ny Pluto amin'ny Monitor an'ny PC ianao na ny efijery fahitalavitra, azonao atao ny manova fantsona amin'ny alàlan'ny fampiasana ny smartphone-nao.
Ho an'izany dia mila manaraka ireto dingana ireto ianao:
Sokafy ny fampiharana na zahao ny tranokala ofisialy
Mandehana any amin'ny setting sy torolàlana hidirana amin'ny Activation
Tokony hisy ny fampisehoana Remote
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny endri-javatra lavitra dia hamokatra ilay kaody fanamarinana
Azonao atao ny manoratra ity kaody ity amin'ny fitaovana tianao hampiasana ny Pluto TV
Viola! Ny Pluto TV-nao dia navadika tsy misy olana. Mila manana kaonty Pluto TV ianao hanombohana ilay fitaovana.
Ahoana ny fomba hamonoana ilay fitaovana?
Tsidiho ny fizarana Activation ao amin'ny Pluto TV
Safidio ny fitaovana tianao esorina
Avy eo tsindrio ny esory / esory mba hanesorana azy amin'ilay lisitra
Tsara ny mandeha.
Ara-dalàna ve ny Pluto TV?
Eny, ara-dalàna ny Pluto TV ary atolotry ny fahitalavitra Smart maro sy orinasa hafa ho fampiharana efa voapetraka. Raha tsy izany dia azonao atao ny mitsidika ny fivarotana ofisialy hisintona azy. Izy io dia fomba mahomby indrindra amin'ny fidirana amin'ny endri-javatra a TV fahitalavitra amin'ny ankamaroan'ny fitaovana.
Azonao atao koa ny mandefa azy io amin'ny fahitalavitrao mba hiala voly, mitovy amin'ny mpanome tolotra DTH, nefa tsy andoavam-bola. Na izany aza, mila serivisy Internet mavitrika ianao (farafaharatsiny 2.5GHz) mba hiasa tsara.
Araka ny antenainao, mba hanohanana ny atiny, PlutoTV dia mampiseho dokambarotra sy dokam-barotra amin'ny fahitalavitra hanome anao tolotra mivantana tsy misy fetra. Tsy azonao atao ny mandingana ireo doka ireo, ary matetika dia ao anaty fantsona no misy azy ireo. Noho izany, fampitana mivantana ara-barotra avy amin'ny tambajotra fantsona.
Pluto TV koa dia manolotra atiny HD na 4K HD maimaim-poana, satria misy fantsona sasany misy amin'io kalitao io. Na izany aza, tsy ny atiny rehetra amin'ny HD sy ny kalitaony no miovaova. Na eo aza izany, ny Pluto TV dia tsy isalasalana fa tsy maintsy ananana ho an'izay mitady hiditra amin'ny fialamboly na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra.
Raha ara-dalàna, Pluto TV dia tsy manana safidy fikarohana. Na dia App aza izany dia mikasa ny hanolotra antso ambony karazana serivisy DTH kokoa ireo mpamorona. Noho izany, tsy maintsy mijery ireo fantsona ianao, ary mahazo miditra amin'ny atiny mivantana. Tsy misy na inona na inona azo takiana.
Sarimihetsika mahatsiravina tsara indrindra hijerena
Urban Venture: Simulation mitondra fiara tena izy
mijery sarimihetsika mivantana maimaim-poana tsy misoratra anarana
manova mozika avy amin'ny youtube ho mp3
geforce traikefa tsy miasa 0x0003
ny fomba fampiasana hoditra amin'ny minecraft
mijery fahitalavitra amin'ny Internet
afaka mahazo tv pluto amin'ny roku ve ianao?